VITA MALAGASY – Blaogin'i Voniary
Indramiko ny famaritana nomen’i E. D. ANDRIAMALALA manao hoe « Ny fandrosoana dia fihezahana hihataka amin’ny maha-biby mba hanakatra fiainana sy fiaraha-monina ambonimbony kokoa sy mahafinaritra kokoa. » Noho izany, ny fandrosoana dia tsy midika velively ho fanariana ny maha-malagasy fa fijanonana amin’ny maha-malagasy ao anatin’ny fivoarana ho amin’ny tsaratsara kokoa. Nahoana ary isika no mihevitra fa izay entin’ny vazaha no fandrosoana? Nahoana no ankahalaintsika ny maha-malagasy antsika? Tsotra ny valin’izany: nosimbain’ny frantsay ny saintsika nanomboka tamin’ny fanjanahan-tany ka tafalatsaka lalina ao amin’ny farahatotsika fa, raha gasy dia ambany. Izao indray moa, vao mainka ampian’ny fanatontoloana, nisandrahaka eto amintsika izao fomba fiainana vahiny rehetra izao ka mahatsapa taraiky isika raha tsy maharaka ireny. Ny hany hampivelatra sy hampandroso antsika anefa dia ny maha-malagasy ihany!
Manjifa ny vita gasy
Diniho anie ny Jiosy e! Miparitaka eran-tany izy ireo ary anisan’ny manan-karena indrindra. Any Etazonia aza moa ny fikambanan’izy ireo, “lobby juif”, no anisan’ny matanjaka ka mahavita mampanova lalàna araka izay tiany. Fa ny mampiavaka azy ireo indrindra dia ity: mijoro ho Jiosy hatrany izy ireo ary miray hina. Firaisan-kina tsy misavoana eny an-danitra fa tena ampihariny ny azy. Araka ilay takelaka iray mitatitra ny resaka tamin’ny “Juif Ashkenaze” iray, 90% ny volan’ny jiosy iray dia mihodina ao amin’izy samy izy ihany. Raha hividy zavatra na tolotra samihafa izy dia ny ao amin’ny mpiray fihaviana aminy aloha, raha tsy misy ao, izay vao mikaroka any an-kafa. Izany no ataony dia mba hanasoavany sy hampivoarany ny mpiray firenena aminy. Fihetsika tsara alaintsika Malagasy tahaka izany! Ny vita gasy koa tsy hoe rofia, tsihy, landy ihany akory. Tsarovy fa amin’izao fotoana izao efa betsaka ny zavatra vitan’ny orinasa Malagasy (sakafo, fitafy, fanafody, fitaovam-pambolena…) ary ny tolotra omen’ny ivon-toerana samihafa ( taokaonty, dokambarotra, famoronana takela-tranokala…). Tsy vitan’izany fa efa mahavita zavatra manara-penitra isika eto an-toerana. Lany andro ny fiheverana fa ny vita gasy dia tsizarizary sy petatoko. Koa, raha hividy akanjo ianao, mividiana ny vitan’ny mpiray tanindrazana amina! Raha hamoaka hira ianao, manantona ireo trano famokarana eto an-toerana!
Manatsara ny vita gasy
Manoloana izany, manana andraikitra koa ireo mpamokatra. Tokony karohina hatrany izay fomba hanatsarana ny vokatra, mba hisy tolotra vaovao hanaitra sy hanintona ny mpanjifa. Amin’izay dia ho resy tosika ny vita vahiny. Misy dokam-barotra nasehon’ny ivon-toerana fampindramam-bola iray izay nanohina ahy. Manatsara ny fiainana, hono, ny findramam-bola ao aminy! Inona ary hoy ianao no nampitainy izany hafany izany? Naka ramatoa mpivarotra mofo gasy izy ireo. Rehefa nanaraka ny toro-hevitr’izy ireo ilay olona dia lasa mpivarotra mofo dipaina! O rey olona! Fa angaha rehefa hoe mivoatra amin’ny tsaratsara kokoa dia midika fampiasana ny zava-bazaha. Amiko, ny fivoarana nandrasako tamin’io ramatoa io izao dia nanatsara ny trano fivarotany, nanatevina ny fitaovany, nanolotra mofo gasy misy tsiro sy hanitra isan’karazany (sokolà, paiso, akondro sy ny sisa). Amin’izay dia hanintona mpanjifa hafa ankoatra izay efa zatra ny tsenany izy, ka hahazo tombom-barotra betsaka. Koa ataoko angamba fa mitondra fivoarana ho antsika kokoa ny mihezaka manatsara izay vitantsika amin’ny maha-izy antsika fa tsy maka tahaka be fahatany ny an’ny sasany.
Ry havako, enga anie mba tsy ho amin’ny fotoana voafetra ihany isika no idradradradra hoe “Manjifa ny vita gasy aho, tombony ho an’ny rehetra”. Ary enga anie hazoto hitrandraka sy hikaroka hatrany ny mpamokatra Malagasy, mba ho reharehantsika ny vita Malagasy.
fandrosoana, maha-malagasy, malagasy, vita gasy, Vita Malagasy
TONGA ETO AN-TANY IANAO MBA HO TANTARA
2 commentaires sur “VITA MALAGASY”
Ping: Vonjeo ny orinasa Malagasy - Book News Madagascar
Ping: Misy mitsinjo ihany kay ny orinasa Malagasy!